Welcome to Aayaha Nolosha » HA QAYAANIN QALBI KU JECEL (Qaybta 2aad)
HA QAYAANIN QALBI KU JECEL (Qaybta 2aad)
August 3, 2018 - Waxaa Qorey : Caaqil Dalmar -
Muxubo si deg-deg ah ayay u oradey waxayna u tagtey dumaashideed Seynab, soo dhaweyn iyo is bariidin kadib waxay ka codsatay in ay ku caawiso dahabkeeda iyada oo u sheegtay in aroos lagu casuumay dad madax iyo mas’uuliyiin ahna ay ka soo qayb gelayaan.
“Dumaashiyey maanta iga tiiri oo aan kuu baxsado” ayay u sii daba dhigtay. Seynab hadal kama soo celin ee waxay ku xir-xirtay Sadkii dahabka ahaa dumaashideed oo markii horaba laga soo qaaday.
Waa ay u mahad naqday ” Walaaley aad ayaad u mahadsan tahay kheyr Alla ha ku siiyo” intay qalbigana ka tiri “Alxamdulilaah Illaahay dahabkeygii waa ii badbaadiyay”
ayay albaabka si dhakhso ah uga soo baxday.
Sugule habeenkii ay balantu bari ahayd waxa ay ka weyday Saynab farxaddii lagu yaqaanay, waxa uuna ka bixi waayay maahsanaan iyo fikir ku saabsan sida uu xaalku ku dambeyn doono, marka alaabta bari la qaato, gurigana la xaaqo.
Markii subixii waagu baryay Seynabna ay iska faraxsan tahay qeli, balse ay la yaaban tahay isbadalka ku dhacay Sugule ayaa waxaa guriga hortiisa lagu soo baakimay gaarigii qaadi lahaa alaabtii Seynab oo u haysatay in ay iyada leedahay.
Xasan ayaa si deg-deg ah uga soo degay baabuurkii “War hoodiyeey..hoodi..ma la baryey” Sugule markii uu hadalka Xasan maqley waxa uu ku noqday jug madaxa ka gaartay, waxa uuna jeclaa in uu saacadaa dhulku la go’o oo naftu dayso.
Ileen Ceeb looma dhinto, hoosta ayuu iskala hadley. “War ileen tanoo kale, ceeb weynaa, bal maxaa igu watey beenta intaa la’eg maan ka fiirsado”.Shalaay iyo isla hadal ayuu ka bixi waayey .
Seynab iyada oo Jikada qureecdii ku diyaarineysa waxa ay aragtey Xasan iyo Sugule oo alaabtii gaariga ku raraya. Waa ay yaabtey!! Seynab waxa ayna kala bixin weyday in ay guri kale u guurayaan iyo in wax kale jiraan, cid wax u sheegtana wey waysay.
Cabaar markii ay yaab!!! la dhex taagneyd Jikada sidii Sanamkii ayay talaabada xagooda u soo qaadey oo tiri “Gacaliye Sugule maxaa dhacay miyaan guureynaa?!!”
Sugule Kalmadaas waxay ku noqotey falaar beerka kala jartay, waa uuna ka jawaabi waayey. Inta uu Seynab fiirmo Kalgacal mugdi galay iyo murugo ku dheehan tahay dayay ayuu hadal la’aan alaabtii daldalkeedii halkii ka sii waday.
Seynab sidii ay Fikir iyo yaab!! ugu jirtay ayey hal mar ku qaylisey “Wax ii sheeg….wax ii sheeg maxaa kugu dhacay oo aad la aamusan tahay?!!!”.
W/D: Maxamed Faarax Duurgal